फागुन ११, काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ शुक्रवारसम्म बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको छ ।
विक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडले बुधवार प्रि- अलोटमेण्ट गरी शुक्रवारसम्म बाँडफाँट गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताएको छ । हाल डाटा भेरिफिकेसनको काम भइरहेकाले बुधवार बेलुकासम्म प्रि-अलोटमेण्ट गर्न सके शुक्रवार बाँडफाँट हुने विक्री प्रबन्धकको भनाइ छ ।
कम्पनीले माघ ३० गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन गरेको हो । प्रतिकित्ता रू. १०० अंकित दरको कुल ४ लाख कित्ता आईपीओमध्ये ५ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र २० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित राखिएको छ ।
आईपीओ विक्री पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० करोड पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ सम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५७ दशमलव ८५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ३१३ दशमलव १६ रहेको छ ।
मन्जुश्री फाइनान्सको क्यूआर कोड
कुमारी बैंकको क्यूआर कोड सेवा विस्तार
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघ अध्यक्षमा परासर